Mowjadaha kuleelka ah oo kasii daray dalka Japan – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeARIMAHA BULSHADAMowjadaha kuleelka ah oo kasii daray dalka Japan
Mowjadaha kuleelka ah oo kasii daray dalka Japan
July 23, 2018 Abdirahman Al-cadaala ARIMAHA BULSHADA, WARARKA MAANTA Comments Off on Mowjadaha kuleelka ah oo kasii daray dalka Japan
Heer kulka Japan ayaa waxaa uu gaaray meeshii ugu sarreeysay, iyadoo Saraakiishuna ay soo saarayaan digniino cusub si dadku u badbaadaan.
Maalamaha Mowjadaha kuleeylka ah ay ka jiraan Japan dad ayaa ku dhintay, Dadka dhintay oo tiradoodu markii hore ay ahayd 15 ayaa hadda lasheegay in ay gaartay 40.
Maanta oo Isniin ah heerkulku waxaa uu gaaray 41.1 Darajo, taasi oo jabisay kaydkii goonida ahaa ee Qaranka oo heerkulka ugu badan uu gaaray 41 darajo Sanadkii 2013 kii.
In ka badan Magaalo ayaa sidoo kale herku waxaa uu maryaa 40 Darajo.
Heey’adda maareeynta musiibooyinka ee japan ayaa sheegtay in Dadka looga baahanyahay in ay jku jiraan meelaha Qaboojiye yaaashu ay ka shidan yihiin.
Madaxweyne ku xigeenka Jubaland iyo Saraakiil Ciidan oo gurmad ah oo ku wajahan deegaanadii Saakay lagu dagaalamay
Wararkii ugu dambeeyay dagaalkii Saakay ka dhacay deegaanka Baar-sanguuni
938,716 total views, 4,856 views today
938,716 total views, 4,856 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
938,587 total views, 4,856 views today
938,587 total views, 4,856 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
938,618 total views, 4,856 views today
938,618 total views, 4,856 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
938,688 total views, 4,857 views today
938,688 total views, 4,857 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
938,727 total views, 4,857 views today
938,727 total views, 4,857 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]